simbi isina tsvina inonyudza pombi
Horizontal slurry pombi
Hydraulic submersible slurry pombi
Horizontal froth pombi
Jecha Gravel Pombi/Dredging Pump
Metal pombi zvikamu
Rubber Pump Zvikamu
Polyurethane pombi zvikamu
SiC Ceramic Slurry Pump Zvikamu
Pombi yemvura yakatwasuka
Kaviri Suction pombi yemvura
Multistage mvura pombi
Pipeline Pombi yemvura
Horizontal sewage pombi
Pombi yetsvina inonyudza
Fluoroplastic kemikari pombi
API610 kemikari pombi
YZQ yakatevedzana hydraulic submersible slurry pombi
WQP Stainless Steel Sewage Mvura Pump
Horizontal Froth Pump Zvikamu
D, DM, DF, DY akatevedzana multistage centrifugal pombi
Horizontal Sefa Press Feed Pump
Polyurethane PU Slurry Pump Zvikamu
kupfeka-resistant rabha slurry pombi
QJ Simbi isina simbi inonyudza pombi (pombi yetsime yakadzika) rondedzero yechigadzirwa
QJ-type submersible pombi imota uye pombi yemvura yakananga mumvura ichipinda basa remidziyo yekusimudza mvura, yakakodzera kutorwa kubva mumatsime akadzika emvura yepasi inogona kushandiswawo kunzizi, madhamu, madhiri uye mamwe mapurojekiti ekusimudza mvura: kunyanya yeminda yekudiridza negomo remubani Yemvura yevanhu nemhuka, asiwo kumaguta, mafekitari, njanji, migodhi, nzvimbo yekushandisa mvura.
QJ Stainless simbi inonyudza pombi (yakadzika tsime pombi) maficha
1. mota, pombi yemvura imwe, pinda mumvura kuti imhanye, yakachengeteka uye yakavimbika.
2. Hapana chakakosha chinodiwa chepombi yetsime uye pombi yemvura (kureva, pombi yesimbi mutsime, pombi yemadota, ivhu zvakanaka uye zvichingodaro zvinogona kushandiswa; pasi pemvumo yekumanikidza, pombi yesimbi, hosi, pombi yepurasitiki uye zvichingodaro inogona kushanda sepombi yemvura).
3. Kuiswa, kushandiswa, nyore kugadzirisa Nyore, duku tsoka, hapana chikonzero chekuvaka pombi pombi.
4. Chimiro chakareruka, kuchengetedza mbishi.
Submarine pombi kushandiswa kwemamiriro akakodzera, kutonga kwakakodzera uye hupenyu hwehukama hwakananga.
QJ Simbi isina simbi inonyudza pombi (pombi yetsime yakadzika) cOnditions of Use
QJ-mhando submersible pombi inogona kushandiswa nguva dzose pasi pemamiriro anotevera:
1. Matatu-chikamu AC magetsi ane rated frequency ye50HZ uye yakayerwa voltage ye380 ± 5% V.
2. Ipombi yepombi inofanira kuva pasi pe 1 mita pazasi pemvura inofamba, asi kudzika kwemvura hakufaniri kudarika mamita makumi manomwe pasi pe hydrostatic level. Mugumo wepazasi wemota inokwana mita imwe pamusoro pemvura yakadzika.
3. Tembiricha yemvura kazhinji haina kupfuura 20 ℃.
4. Zvinodiwa zvehutano hwemvura: (1) mvura yemvura yemvura haisi yakakura kudarika 0.01% (uremu hwehuwandu);
(2) PH kukosha muhuwandu hwe6.5 ~ 8.5;
(3) chloride yemukati isingapfuure 400 mg / l.
5. Inoda kukosha kwakanaka, rusvingo rwakatsetseka, hapana tsime rakadzika.
QJ Stainless simbi tsime submersible pombi (yakadzika tsime pombi) structural tsananguro
1.QJ-type submersible pump unit inosanganisira: pombi yemvura, submersible motokari (kusanganisira cable), mapaipi emvura uye kushandura kushandura kunoumbwa nezvikamu zvina.
Submersible pombi ye-single-suction multi-stage vertical centrifugal pump: submersible motor yemvura yakavharwa-yakazadzwa yakanyorova, vertical three-phase cage asynchronous motor, motor and pump through the claw kana single drum coupling zvakananga; akashongedzerwa neakasiyana zvirevo zveatatu Core tambo; kutanga midziyo yemhando dzakasiyana-siyana dzekuchinja kwemhepo uye self-decompression starter, pombi yemvura yehupamhi hwakasiyana hwepombi yesimbi yakagadzirwa neflange connection, pombi yepamusoro-soro ine gedhi rekutonga.
2. Submersible pombi Yese nhanho yebaffle inoiswa nerubber bearing; iyo impeller inogadziriswa kune pombi shaft ine sleeve tapered; iyo baffle inorukwa kana kuti mabhaudhi.
4. Submarine motor shaft ine labyrinth sandstand uye maviri reverse musangano we skeleton mafuta chisimbiso, kudzivirira kuyerera kwejecha mumotor.
5. Submersible motor ine mvura lubricated bearings, chikamu chezasi cherabha pressure inodzora firimu, pressure inodzora chitubu, inoumbwa nekamuri yekuvhiya, gadzirisa kudzvanywa kunokonzerwa nekushanduka kwekushisa; mota inomonereka ine polyethylene insulation, bhachi renaironi rinogara zvinhu zvemutengi mvura, Cable connection by QJ-type cable connector tekinoroji, chinongedzo chekubatanidza kubva pakukwesha pendi layer, chakabatana, welding zvakasimba, nerabha mbishi yakatenderedza jira. Uye wozoputirwa nemvura-inodzivirira adhesive tepi 2 kusvika ku3 akaturikidzana, kunze kwepakiti pazvikamu zviviri kusvika ku3 zvematepi asingapindi mvura kana glue ane rubber tape (bhasikoro bhandi) kudzivirira mvura kuti isapinda.
6. Motokari yakavharwa, yakavharwa nechaiyo stop bolt uye cable outlet.
7. Nzvimbo yepamusoro yemotokari ine gomba rejekiseni remvura, kune gomba remhepo, chikamu chepasi chegomba remvura.
8. Chikamu chepasi chemotor chine chepamusoro nechepazasi chepasi, chinorovera pagorofu kuti chitonhodze, uye chiri kukuya simbi isina tsvina, nepombi ichikwira nekudzika axial force.
QJ Simbi isina simbi inonyudza pombi (pombi yetsime yakadzika) kushanda musimboti
Usati wavhura pombi, pombi yekusveta uye pombi inofanira kuzadzwa nemvura. Mushure mokunge pombi ichiputirwa, iyo impeller inotenderera nekukurumidza, uye mvura inotenderera neblade. Pasi pekuita kwe centrifugal simba, inosiya impeller kunze uye mvura inononoka zvishoma nezvishoma uye kudzvinyirira kunowedzera zvishoma nezvishoma kubva pombi Export, kubudisa pombi kubuda. Panguva ino, pakati peblade iri pakati pemvura inokandwa kune yakatenderedza uye kuumbwa kwezvose zvisina mhepo uye isina mvura vacuum yakaderera kudzvanywa nzvimbo, mvura dziva mudziva rekumanikidzwa kwemhepo pasi pechiito chekusveta. pombi ichipinda mupombi, mvura inoramba ichienderera Inogara ichiyamwa kubva padziva remvura uye ichiyerera ichibuda mupombi inoyerera.
QJ Simbi isina simbi inonyudza pombi (pombi yetsime yakadzika) use uye maitiro
QJ-type submersible pombi inobva pamitemo yenyika yakagadzirirwa zvigadzirwa zvekuchengetedza simba, zvinowanzoshandiswa muminda yekudiridza, maindasitiri uye mabhizimisi emigodhi yekupa mvura uye kudhonza, mapani, vanhu vemakomo, mvura yezvipfuwo.
Pombi ine QJ submersible pump uye YQS submersible motor mune imwe yepasi pemvura kuti ishande pasi pemvura. Nechimiro chakareruka, hukuru hudiki, huremu huremu, kuisa, kugadzirisa nyore, kushanda kwakachengeteka, kuvimbika, simba rinoshanda uye zvichingodaro.
QJR nhevedzano yematsime ane pombi inodzivirira kupisa inodzivirira kunyura inonyudza matatu-chikamu asynchronous mota yakananga mune imwe, yakaunganidzwa mupombi inodzivirira kupisa, tembiricha yemvura inopisa inosvika 100 ° C, inonyudzwa mutsime. , Mvura chishandiso chinoshanda; geothermal nderimwe resimba rakachipa, rakachena, risingapere simba razvino, rave kushandiswa zvakanyanya mukudziya, kurapwa, kugeza, kubereka, kudyara, indasitiri nekurima, mafekitori nemigodhi, mabasa evaraidzo, zvivakwa zvehutano, chikamu. Iyo ine mabhenefiti ekushanda kuri nyore, kushanda kwakavimbika, hapana ruzha, kuita kwakanakisa, kugona kwakanyanya kweyuniti, kuisirwa nyore uye kugadzirisa. Iine zvakawanda zvakanaka zvakadai sekudzivirira kupisa, corrosion resistance uye anti-aging. Ndiyo chigadzirwa chekupedzisira chemvura inopisa ye embankment.
1. Kushandiswa kwakatwasuka, sepamutsime;
2. Kushandisa oblique, sekunge mumugodhi une mugwagwa unotsvedza;
3. Horizontal kushandiswa, zvakadai mudziva
QJ Submersible yemagetsi pombi yetsime (yakadzika tsime pombi) Chengetedzo
1. Mapombi emvura akadzikama anofanira kushandiswa mujecha riri pasi pe 0.01% yemvura, imba yepombi yakashongedzerwa netangi yemvura isati yatanga, simba rinofanira kusangana nekutanga kwemvura isati yatanga.
2. Itsva kana yakagadziridzwa yakadzika tsime pombi, inofanira kugadzirisa pombi shell uye impeller clearance, iyo impeller mukushanda haifaniri kupesana negoko.
3. Pombi yetsime rakadzika inofanira kunge ichimhanya pamberi pemvura kupinda mugomba uye yakatakura goko rekutanga kumhanya.
4. Pamberi pekutanga kwepombi yetsime rakadzika, zvinhu zvekuongorora zvinofanira kuita zvinotevera:
1) mabhaudhi ebhesi anosimbiswa;
2) axial clearance kusangana nezvinodiwa, gadzirisa bolt nuts yakaiswa;
3) iyo gland yekutakura inosimbiswa uye yakasvibiswa;
4) mabheji emota akaiswa mafuta;
5) Tenderedza mota rotor uye kumisa michina neruoko inoshanduka uye inoshanda.
5. Pombi yetsime rakadzika haigone kushata kana paine mvura. Pombi Imwe kana maviri mapombi anofanira kunyudzwa pasi pemvura 1m. Kushanda kunofanira kugara kuchicherechedza kuchinja kwehuwandu hwemvura mutsime.
6. Panguva yekushanda, paunowana kuzununguka kukuru kwakakomberedza nheyo, unofanira kutarisa pombi inotakura kana injini yekuzadza motokari; kana yakawandisa kupfeka uye kuvuza, inofanira kutsiva zvidimbu zvitsva.
7. akayamwiwa, akadirwa nedhaka rakadzika pombi yetsime, asati amisa pombi, kuiswa kwemvura yekugeza.
8. Usati wamisa pombi, unofanira kuvhara valve yemvura, kubvisa simba, kuvhara bhokisi rekushandura. Kana nguva yechando ichiremara, mvura inofanira kuiswa pombi.
Disclaimer: Iyo intellectual property inoratidzwa pane yakanyorwa chigadzirwa (s) ndeyevechitatu mapato. Izvi zvigadzirwa zvinongopihwa semienzaniso yekugona kwedu kugadzira, uye kwete kutengeswa.
Zvakapfuura: China Yakanakisa Gravel Pump Exporters Makambani - SYB-mhando Yakakwidziridzwa Self-primping Disc Pump – Boda
Zvinotevera: Antiabrasive Slurry Value
12v Pombi yemvura
1hp Pombi yemvura
2hp Pombi yemvura
5hp Pombi yemvura
Otomatiki Pombi Yemvura
Battery Powered Water Pombi
Pombi Yemvura Inotonhorera
Dc Pombi Yemvura
Pombi Yemvura Yakadzika
Pombi Yemvura Yakasviba
Kaviri Suction Mvura Pombi
Magetsi Pombi Yemvura
Gadheni Mvura Pombi
Pombi Yemvura Yegasi
Pombi Yemvura Yemaoko
High Pressure Mvura Pombi
Horizontal Mvura Pombi
Mvura Inopisa Inotenderera Pombi
Pombi Yemvura Inopisa
Mvura Inopisa Inotenderera System
Manual Pombi Yemvura
Metal Water Pombi
Petrol Mvura Pombi
Pombi Inotakurika Yemvura
Rv Pombi Yemvura
Solar Powered Water Pombi
Solar Mvura Tsime Pombi
Pombi yeMvura yeSolar
Submersible Pombi Yemvura
Mvura Inosimudzira Pombi
Mvura Feature Pombi
Pombi Yemvura Yemvura
Mvura Jet Pombi
Mvura Inopihwa Sump Pump
Mvura Yekumanikidza Booster
Mvura Inosimudzira Booster Pump
Mvura Yekumanikidza Pombi
Water Pressure Tangi
Pombi yemvura Aquarium
Pombi Yemvura Yeimba
Muchina Wepombi Yemvura
Pombi yemvura Rubber Cap
Mvura Pombi Rubber Chisimbiso
Mvura Yekudhonza Pombi
Tangi Yemvura Nepombi
Pombi Yekutamisa Mvura
Pombi yeMvura zvakanaka
Abrasive slurry pombi zvikamu Slurry Pump Impeller
Slurry Pump Spare Zvikamu
SFX-Type Yakasimudzira Kuzvimiririra
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd isangano rinoshandira musika wepombi wepasi rose muPRC. Iyo inonyanya kushanda pombi & pombi inofambiswa midziyo, pombi zvikamu & kuramba kupfeka castings, mamwe hydraulic muchina, accessories nezvimwe.
Kuchamhembe kweShilipu Village, Chang'an District, Shijiazhuang, China.